Masar oo joojisay wada-xajoodkii Diblomaasiyadeed ee Turkiga + sababta | Najah Media Network
Bogga Hore Wararka Manta Masar oo joojisay wada-xajoodkii Diblomaasiyadeed ee Turkiga + sababta
Masar oo joojisay wada-xajoodkii Diblomaasiyadeed ee Turkiga + sababta
Wasiirka Arrimaha Dibedda ee Masar, Samiix Shukri ayaa sheegay in xilligan la joojiyey Wada-xaajoodkaasi, isla markaana uusan jirin Wafdi Masaari ah oo ku wajahan dalkaasi.
Wasiirka oo Wareysi siiyey TV Maxali ah waxa uu ku nuuxnuuxsaday inaysan jirin wax Taariikh Rasmi ah oo ay labada Dowladood dib ugu eegi doonaan Xiriirkooda Diplomaasiyadeed.
“Waxaan rajeynaynaa in Xiriirka labada dal asaas u noqdo qoddobada waa weyn ee Deganaanshaha Xiriiradda Caalamiga, Faragelin La’aanta Arrimaha Gudaha iyo Deris Wanaaga” ayuu yiri Wasiir Samiix Shukri.
Waxa uu intaasi ku daray inaan la oggolaan doonin dhaqdhaqaaq kasta oo dhul Dowladeed oo loo adeegsanayo Deganaansho La’aanta dal kale.
Wasiirka waxa uu si kulul u naqdiyey La-taliyaha Madaxweynaha Turkiga, Yaasiin Aktay, kaasi oo dhaliilay Qawaaniinta Dowladda Masar ee ka dhanka ah Hoggaamiyayaasha iyo xubnaha Ururka Akhwaanul-Muslimiinka ee Masar laga mamnuucay.
Maqaal uu La-taliyaha Madaxweyne Erdogan dhawaan ku qoray Wargeyska Turkishka ee YENI SAFAK waxa uu ku soo hadal-qaaday Sanad-guuradii 8-aad ee ka soo wareegtay waxa uu ugu yeeray Afgembiga Milliteri ee Masar ka dhacay.
Inkastoo uu Xiriirka Masar iyo Turkiga uu mar kale xumaaday, haddana waxaa socday Isku-day Diplomaasiyadeed oo lagu hagaajin lahaa Xurgufta ka dhex aloosan, iyadoo Wafdi Turkish ah ay Qaahiar booqdeen bishii la soo dhaafay ee May 5-dii ilaa 6-dii, kadib, markii ay Dowladda Masar ka heleen Casuumaad Rasmi ah.
Maqaal horePuntland oo saaka xukun dil toogasho ah ku fulisay in ka badan 15 xubnood
Maqaal XigaAl-shabaab oo shaacisay Tiro Askar ay ku dileen Weerarkii ka dhacay Wisil